တစ်ယောက်တည်း (ALONE) နေခြင်းက ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင်လဲ? - Lifestyle Myanmar
တချို့လူတွေကတေ့ာ တစ်ယောက်တည်းနေရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ တချို့ဆို တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းက အထီးကျန်ခြင်းနဲ့တူတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ တ စ်ယောက်တည်းအချိန်ဖြုန်းတာနဲ့ အထီးကျန်နေတာ မတူပါဘူးနော်.
တချို့တွေက တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို ကြိုက်ကိုကြိုက်ကြတာပဲ။ တစ်ကယ်က အများနဲ့လုပ်နေကျကိစ္စတွေက တယောက်တည်းနေလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့် လူတွေက တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားမှာကြော က်လေ့ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ တမင်တစ်ယောက်တည်းနေတတ်တာပါ။
တစ်ယောက်တည်းနေမှ သူတို့ရဲ့ အင်အားတွေ အတွေးတွေ ပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပီ ဒီတော့ တယောက်တည်းနေတာက ဘ ယ်လိုအကျိုးတရားတွေရလဲ?ဘာကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်..
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေက ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ မီဒီယာတွေ သတင်းတွေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အမြင်တွေဟာ ကျွန် တော်တို့ကို အတွေးများစွာပေးပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာဆူညံမှုတွေ ဒွိဟတွေနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးနဲ့ဝေးတဲ့တစ်နေရာရာမှာ တယောက်တည်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စိတ်ထဲကဆူညံသံတွေရာ ဘဝထဲက ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုပါ ရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းစိတ်က ပိုကြည်လင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရင် တယောက်တည်းနေဖို့အချိန်ပေးပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေကြည့်ပါ.
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ပြင်ပကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာတွေနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ့်အတွင်းပိုင်းစိတ် စိတ်အတွင်းက အသံတွေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာရပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့အသိနဲ့စိတ်အတွင်းကို ခိုင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင် Confidenceဖြစ်လာတယ်ပေါ့။
ပြင်ပမျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေ အ သိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ နေနေတဲ့အချိန်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရလာဒ်တွေကို စောင့်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအတွက်စိုးရိမ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်တည်းနေလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေကိုရှုထောင့်ပြောင်းပြီးထပ်တွေးကြည့်ရင်း သင်စိတ်ပူနေခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ ဘာမှမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာကိုတွေးမိပါလိမ့်မယ်.
တယောက်တည်းနေပြီး ကျွန်တော်တို့ အိမ်မက်တွေ ပန်းတိုင်တွေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာတွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဖို့လည်းအခြေအနေ ပိုပေးပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတွေကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း အိမ်မက်တွေနောက်ကို လိုက်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကပဲ ကျွ န်တော်တို့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့အိမ်မက်တွေကို ထောက်ပံပေးတဲ့လှုံဆော်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုဖောက်နေတဲ့အတွ က် အမှီအခိုကင်းပြီး လုပ်သမျှအရာတိုင်းကို ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမါ့မယ်
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တယောက်တည်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ၂ယောက် ၃ယောက်လောက်ဝိုင်းလုပ်နေတ တ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း တကယ်က လုပ်နိုင်နေတာပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းက သင့်ကိုတခြားလူပေါ်မှီခိုတတ်တဲ့စိတ်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားကိုးလာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နော် ..ကဲ.ဒီလောက်ဆို တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုသိလောက်ပါပြီ..တစ်ယောက်တည်းနေရမှာ မကြော က်ပါနဲ့။ များသောအားဖြင့် ညဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေ ထက်မြက်တဲ့သူတွေက တစ်ယောက်တည်းသမားတွေများပါတယ်…